Quique Setien oo sheegay sababta uu u yimid kooxda Barcelona… muxuuse ka yiri Lionel Messi? – Gool FM
Quique Setien oo sheegay sababta uu u yimid kooxda Barcelona… muxuuse ka yiri Lionel Messi?
(Barcelona) 06 Mar 2020. Tababaraha kooxda kubadda cagta Barcelona ee Quique Setién ayaa qalbigiisa ku furay wareysi uu ku bixiyay “El Periodico”, wuxuuna shaaca ka qaaday in aanu waligii filayn inuu noqdo macalinka kooxda Barcelona, inkastoo ay jiraan dad badan oo u sheegeen in ay taas filayaan.
61 Jirkan ayaa yimid kooxda Barcelona si uu u noqdo badelka Ernesto Valverde, wuxuuna la gaaray natiijooyin wanaagsan, inkastoo ay guuldarro ka soo gaartay kulankii lasoo dhaafay El Clásico ee Real Madrid.
Haddaba Quique Setién ayaa wareysigan uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Waa run in dad badani ay ii sheegeen inaan tababari karo kooxda Barcelona, laakiin waligeey uma arkin in tani ay dhici karto… marka maxaan ka qabtay shaqadayda, oo iga dhigay inaan u qalmo tababarka Barca?”.
“Waxaan arkay sababihii aan u imid halkaan kaddib, taasoo ah inaan heysto fikrad la mid ah qaab kubadda cagta ay dooneyso Barcelona inay u ciyaarto”.
“Waa run inay jiraan ciyaartoy badan oo aad uga fikiraya wax ka qabashada garoonka dhexdiisa, laakiin Messi wuxuu xalliyaa 90% kulamada kooxda, sidaas darteed qof walbaa wuxuu raadiyaa Messi maxaa yeelay waad ogtahay waxa uu sameyn karo, tani waa wax iska caadi ah sababtoo ah Messi wuxuu iga dhigaa inaan helo nasiino badan”.
Klopp oo si rasmi ah u xaqiijiyay dhaawaca mid ka mid ah xiddigihiisa ugu muhiimsan kahor kulanka Bournemouth
Macalin Ole Gunnar Solskjær oo ka hadlay kulanka la wada sugayo ee Manchester derby